Ukusabela Ngokushesha
A.Ngemva kokuba sesikwazile ukuthola uphenyo, kuzoba khona abasebenzi bomkhiqizo abahlobene abazosingatha umbuzo wakho futhi banikeze impendulo.Ngoba wonke umuntu onikeza amakhasimende uchwepheshe kakhulu, unesipiliyoni somkhiqizo esifanele, angakwazi ukuxhumana kahle namakhasimende, futhi anikeze isevisi yobungcweti yomuntu oyedwa.
B.Hhayi i-imeyili kuphela, siphinde sisekele amathuluzi ahlukahlukene okuxoxa aku-inthanethi okuxhumana, 7*24h ku-inthanethi, njengeWhatsapp, Wechat, Skype, Linkdin, Facebook, Instagram...
Singasebenzisa noma yiliphi ithuluzi lokuxoxa noma isofthiwe yezenhlalo othanda ukuyisebenzisa.Landela okuthandayo, wena unguNkulunkulu wethu.
C.Singakwazi ukusekela ihhovisi elingumakhalekhukhwini.Uma unesicelo sombuzo ophuthumayo, singaphendula ngokushesha olwazini ngisho nangamaholide noma amahora angewona okusebenza.
D.Sisebenza ngohlelo lochwepheshe lwentengo-yokusungula-isisindo, olungabuza ngokushesha futhi lucaphune, lunikeze ulwazi lwesisindo ukuze kubalwe impahla, futhi sikhiqize ngokushesha ithebula lekhotheshini eliphelele.
E.Ngaphezu kokusekelwa kwehhovisi lesistimu, siphinde sibe nefolda yedatha, ukuze ukwazi ukwabelana ngamafayela edatha owadingayo noma kunini.Uma ungakwazi ukuyilanda, singakunikeza futhi.Noma uma udinga usizo lwethu ekukhetheni imodeli, singakunikeza impendulo ngokushesha.
F.Ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda, sizolandela ngenkuthalo ukuqhubeka kwe-oda lakho, noma ngabe liyathunyelwa, isimo se-logistics ngemuva kokuthunyelwa, kanye nokusetshenziswa kwakho, mema
IServo Motor IAc Servo Drive IMitsubushi HMI Delta HMI ILogic Controller Plc 1kw Servo Motor